AKHRISO: Sida uu TikTok u saameeyey Khilaafka Mareykanka iyo Shiinaha - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAKHRISO: Sida uu TikTok u saameeyey Khilaafka Mareykanka iyo Shiinaha
AKHRISO: Sida uu TikTok u saameeyey Khilaafka Mareykanka iyo Shiinaha
Washington (JO) – Muuqaallada qoob ka ciyaarka, heesaha, iyo majaajillooyinka gaagaban, ayay caan ku tahay barta Tiktok iyada oo si gaar ah uu u soo jiitay dhalinayarada daafaha caalamka ku nool.
Barnaamijkan TikTok oo lala xiriiriyo dowladda Shiinaha, waxay ka mid tahay shirkadaha ay saameysay xiisadda ka dhex aloosan madaxweynaha Shiinaha Xi iyo dhiggiisa Mareykanka Trump.
Dalalka Mareykanka iyo Australia ayaa sheegay iney xayirayaan TikTok halka Hindiyana ay barnaamijkaasi ka saartay keydka laga soo dejisto App-ka ee dalka Hindiya ee loo yaqaanno App Store.
Sida oo kale barnaamijkan wuxuu dadka isticmaala u oggolaanayaa iney farriimo isweydaarsadaan.
Heerkey gaarsiisan tahay arrintan?
Laga soo billaabo 2019-kii, app-ka wuxuu kaalmaha ugu horreeya uga jiray barnaamijyada la soo dejisto ee baraha bulshada ku xiriirto ah.
Xayiraadaha ka dhashay cudurka safmarka ee Covid-19 wuxuu qayb ka qaatay iney dad badan xiiseeyaan app-ka TikTok iyo barnaamijka ay isku bahda yihiin ee Douyin oo laga isticmaalo dal weynaha Shiinaha. Heer caalami ahna waxaa soo dejistay ku dhawaad 2 bilyan oo qof halka ay si toos ah u isticmaalaan 800 oo malyan oo qof.
Dalka ugu weyn ee App-kan aadka looga isticmaalo ayaa ahaa wadanka Hindiya, kaas oo noqonaya suuqa labaad ee Shiinaha kuna xiga Mareykanka.
“Soo jeedinta iyo eedda dowladda Shiinaha ka dhanka ah, gabi ahaanteedaba waa khalad, waana been abuur,” ayuu yiri Theo Bertam oo ah madaxa arrimaha siyaasadda TikTok ee Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika.
TikTok ma loo isticmaalaa dacaayadaha Shiinaha?
Welwel kale ayaa laga qabaa faafreebka arrintan la xiriira.
Shiinaha wuxuu ka mid yahay dalalka leh adeeg internet oo aad u xaddidan, iyada oo caan ku ah inay muwaaddiniinteeda ka ilaaliso waxyeellada dhinaca internet-ka uga imanaya.
“Hubeynta Qabaa’ilka Libya Waxay Abuuraysaa Soomaaliya cusub”
Ma Dhabbaa In Lagu Guuleystay Tallaalka Fayraska Korona Oo Dadku Si Caadi Ah U Qaadan Doonaan?